KALA DUWAN CHERRY ZHUKOVSKAYA: SHARAXAAD, BEERITAANKA, DARYEEL - CHERRY
Cherry Zhukovskaya tixgeliyey taranta taranta. Kala duwan waa mid aad u weyn waxaana inta badan laga helaa sirqoollada beerta. Cherry Zhukovskaya, sharaxaad ka mid ah kala duwan oo leh sawir mawduuc oo kaas oo la siin doono waqti dambe maqaalkan, sida ku cad dib u eegista waxay leedahay tayada dhadhanka u fiican. Wax-soo-saarka marwalba way badan tahay, mana jirto baahi loo qabo in lagu isticmaalo dadaal gaar ah si loo daryeelo geed khudradeed. Taasina waa sababta ay beeralaydu ku faraxsan yihiin inay u koraan geedkan oo waxay u isticmaalaan miraha xilliga goosashada, iyo sidoo kale diyaarinta noocyada kala duwan ee dubista iyo macmacaanka.
Taariikhda galkan waxay bilowday dhowr sano ka hor. Waxaa laga saaray Machadka Cilmi-baarista ee cilmi-baarista ee All-Ruushka S.V. Zhukov iyo E.N. Kharitonova. Daraasadeynta waxaa fuliyay pollination waxayna ku salaysan tahay noocyada Michurin ee jeeriga. Horeba 1947, jeeriga Zhukovsky ayaa lagu taliyey beerista Volga ee Dhexe, Nizhnevolzhsky, Central Black Earth iyo gobollada Bartamaha ee Russia.
Astaamaha calaamadaha noocyada geedaha khudradda ah waa:
Geedkan beerta waa mid dhexdhexaad ah, dhererkiisu caadi ahaan waa qiyaastii 2-3 m, Crohn waa wareegsan, caleen dhexdhexaad ah iyo faafin. Laamuhu way yar yihiin, waxayna ku daboolan yihiin jilif midab casaan ah. Caleemaha waa yar yihiin, waxoogaa cidhiidhi ah oo aan lahayn pubescence. Caleemaha waa kuwo ballaaran oo aad u dheer, oo leh ilko yar yar oo ku yaal geesaha. Dusha sare ee caleemaha waa dhalaaliye iyo wax yar oo gudaha ah gudaha, taas oo u eg doonta doon.
Florescences ee Cherry Zhukovskaya waxaa laga sameeyey shan ka mid ah ubax waaweyn oo midab cad, dhexroor waxay ku saabsan tahay 3 cm. Qodobka ubaxa waa weyn oo wareegsan. Calyx-khafiif ah oo cagaar ah.
Qaybta ugu muhiimsan ee khudradda miro ee lafdhabarta, qayb yar ayaa la sameeyaa koritaanka sannadkii la soo dhaafay. Buundada ayaa aad u ballaaran, marka la eego 4 g ilaa 7 g, qaabkoodu waa oval: saldhigga wareega iyo caarada sare. Midab kilyoon Cherry. Lafahooda sidoo kale waa kuwo aad u weyn waxayna qaadataa ilaa 7.7% wadarta guud ee uurjiifka. Jidhku waxa uu calaamad u yahay dhismaha cufan iyo casiirka. Si aad u dhadhamiso berry waa raaxo leh-macaan, wax yar oo la mid ah cherry macaan.
Marka la qorsheynayo in ay koraan noocan oo kale ah cherry on sawirkaaga, waa inaad ogtahay waxa shuruudo noqon doonaa mid ku habboon horumarka degdeg ah iyo midho leh ee kala duwan ee Zhukovskaya kala duwan.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay dib u eegista, noocyo cherry jukovskaya ayaa sii wadi kara noloshooda illaa 20 sano, 15 ka mid ah geedku wuxuu leeyahay miro badan.
Geedka wuxuu jecel yahay kulaylka iyo iftiinka qorraxda. Sidaas darteed hubi inaad ku beerato meel bannaan oo qorrax leh. Doorashada ugu fiican waxay noqon kartaa meel u dhow guriga ama garaashka. Waxa kale oo muhiim ah in si habboon loo qaybiyo geedaha ku yaal goobta si loo siiyo meel ay ku koraan. Haddii ay suurtagal tahay, masaafada u dhexaysa geedo waa inay ahaataa ugu yaraan saddex mitir.
Hubi noocyada noocan ah ee jeeriga sida Kharitonovskaya, Vladimirskaya, Shokoladnitsa, Black Large, Turgenevskaya, Felt Cherry.
Wixii koritaanka wanaagsan ee geed miro this haboon loamy ku habboon ama bac badan. Laguma talinayo in la beero noocyo kala duwan oo ah ciidda dhoobada ah. Cudurka dhulku waa muhiim. Way fiicantahay haddii calaamaddu ku dhowdahay dhexdhexaad.
Haddii aysiidhka goobta kor u kaco, markaa waxaa lagu dhejin karaa liming. Dhulka degaanka ah ee cherry Zhukovskaya ma aha mid ku habboon sidoo kale. Haddii ay dhacdo sidaa daraadeed biyaha dhulka ku yaalay meel u dhow dusha sare, iyo ma jirto meel dheeraad ah oo lagu beeray geedo, ka dibna waa in la dhigo nidaam dheeri ah oo dheecaan leh. Goobtu waa inay hodan ku tahay macdanta nafaqada leh iyo walxaha dabiiciga ah.
Haddii dhirta noocaas ah sida jeeriga shimbiraha, liniinta, roodhida, qulqulka, digirta iyo firileyda si fiican ayey u koraan meeshii uu cherry loo qorsheeyay in la beero, tani waxay muujinaysaa in qaabka noocaas ah uu ku raaxeysan doono noocyada jukuutiga ee Zhukovskaya.
Ma taqaanaa? Cherry ee ka kooban waxay leeyihiin tiro badan oo coumarins. Kuwani waa walaxyo si waxtar leh u saameeya xinjirta dhiigga iyo samaynta dhiig. Marka la eego, cherry wuxuu aad u faa'iido u leeyahay dadka qaba cudurrada xididdada iyo wadnaha, sidoo kale waxay leeyihiin halis ah xinjiro dhiig.
Geedka loo beeray Zhukovskaya
Geedka berri ah wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorto geedo, ka dibna ku beeri goobtaada, ka dib talooyin badan.
First of dhan, waa in la ogaadaa in iibsashada geedo ugu fiican ee xanaanada. Haddii aysan jirin wax suurtagal ah, markaa waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo doorto iibiyaha si aan u iibsan walxo tayo yar oo tayo leh.
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato geedo kuwaas oo koray xaaladaha udhaxeeya kuwa aad qorsheyneyso inaad sii korodho mustaqbalka. Nuqul noocan oo kale ah ayaa si dhakhso ah u fududeeya isla markaana fududaanaya meel cusub, wuxuu si fudud u qaadan doonaa xididka, taas oo macnaheedu yahay inay qaboobeyso qabowga qaboobaha si adag.
Ma jiraan wax dhaawac ah oo farsamo ah oo ku saabsan seedling, waa in aysan jirin koritaan iyo qaababka qaababka kala duwan. Nidaamka asaasiga ah waa inuu ahaadaa mid biyo ah oo cusub.
Qodobka beeritaanka tayada waa inay si siman u dhigmaan tusmooyinka soo socda:
dhererka waa qiyaastii 90-130 cm;
dhererka dhererka 20 cm ilaa 35 cm;
dhexroor shtamb ee 10-15 cm
Mashruuca iyo tiknoolajiyada soo degitaanka
Nidaamka ugu fiicneyn ee beeritaanka johannesört kala duwan: 5x3 ama 5x2.5 m.Waxay ka fiican tahay inaad qodo godadka horay, ka dibna ciidda ka hor inta beerto waxay leedahay waqti si ay u ahaato. Miiskoodu waa inuu ahaado 50-60 cm.
Waa muhiim! Haddii xididdadu ay qalalan yihiin ama jilif ee laamaha iyo jirridda ay waxyeello, ka dibna waa wax aan macquul ah si aad u iibsato noocan oo kale ah.
Baaxadda waa isku mid. Kaliya kubbadda ballaaran ee bacrin ah waa in lagu dhajiyaa godadka, Bacriminta macdanta (potassium chloride, phosphate) iyo walxaha organic (humus ama digirta qudhuntay) waa in lagu daraa. Haddii ciidku yahay nooca dhoobo, markaas waxaad buuxin kartaa qadar yar oo ciid ah.
Beerto waxaa lagu taliyaa guga, sida ugu dhakhsaha badan ee boodhka dhulka, laakiin had iyo jeer ka hor bilowga xilli sii kordhaya, sidaas darteed in burooyinkeeda ayaa weli la xiray. Nidaamka Rootka ka hor beerashada waxay u baahan yihiin in la qoyo maalin, iyada oo kordhinaysa kicinta kicida biyaha.
Habka geedo beerto tallaabo tallaabo waa sida soo socota:
In god cirifka ah waxaad u baahan tahay inaad sameysid jeexdin. Cabbiradu waa inay ahaadaan kuwo ku filan si ay xididada si xor ah kuugu jiraan oo aanad qorin.
Boorash alwaax ah ayaa lagu dhejiyaa badhtamaha godka, iyada oo caawimaad kaas oo geedka yar yar laga goyn karo goor dambe.
Geedka a cherry waxaa lagu dhuftay si fiican si qoorta xidid waa 5 cm ka sareeya heerka heerka.
Roots ayaa si taxaddar leh loogu daboolay dhulka. Ka dibna dhulku wuu xiraa godadka oo dhan. Dhulku waa in si taxadar leh loogu xakameeyaa majaraha ama cagaha jihada ka soo jeeda dhinaca geeska. Looma baahna in la cadaadiyo si looga fogaado waxyeeleynta abuurka iyo nidaamka xididka.
Dool waa in la sameeyaa qaybta ugu dhow ee waraabinta waraabinta.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad si fiican u biyo u dhajiso qiyaasta 30-40 litir oo biyo ah hal shinni ah. Hadday, sababtoo ah waraabinta iyo dhulalka dhulka, xididdadu waxay u muuqdaan, inay buuxsamaan ciidda.
Doolaha hadda waxaa lagu mulched dhulka dabacsan ama sida balka.
Dhamaadka dabiiciga ah waa in lagu xiraa lafta jilicsan ama xadhigga godadka alwaax. Peg laftiisa ayaa lagula talinayaa in la gooyo heerka laanta dhinaca koowaad ee geedka.
Daryeelka saxda ah ee geedka
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ee jeeriga waa mid aan loo dulqaadin daryeelka, weli waxaa jira tiro ah shuruudo in ninkii beerta ka shaqeeyaa ay tahay in la tixgeliyo marka la kordhinayo geedaha sida.
Ma taqaanaa? Cherry waa la sumoobi karaa. Ama halkii lafkeeda. Waxaa ka mid ah amygdaline, kaas oo jirka bani-aadmiga ah loo beddelo geedka hydrocyanic. Waxay si gaar ah khatar ugu yihiin carruurta. Dadka qaangaarka ah, hal ama laba lafo ma keeni doonaan waxyeelo.
Dhaqdhaqaaqyada kuu oggolaanaya inaad kobciso warshad beerta adag oo leh caafimaad leh calaamad wanaagsan oo ka mid ah fruiting, waxay inta badan ka kooban tahay manjooyin, waraabinta, bacriminta waqtiga iyo ilaalinta cudurka.
Muddo xilli ah, waxaad u baahan tahay inaad afar geed biyo u cabto:
waraabinta ugu horraysa waxay dhacaysaa illaa toddobaad iyo badh ka hor inta uusan geedka bilaabin;
waraabinta labaad - ka dib ubaxa qallafsan;
Qodobka saddexaad ee ciidda waa inay kudhowaan muddada miro-soosaarida;
Waraabinta afaraad - goosashada ka dib, laakiin ugu dambeyn Oktoobar 17-20.
Waxaad u geli kartaa laba siyoodood oo geed ah:
Ku shub biyo qabriga. Marka hore, grooves waxay u baahan yihiin inay qodaan. Waa in lagu meeleeyaa fogaan ah 50 cm geedkii - ugu horeysay, iyo ka dib 50 cm kale - labaad. Biyaha waxaa lagu shubay geelaha sida, iyo marka ay si buuxda u galaan dhulka, ciidda waxaa la mulched leh sida balka, caws, peat, ama waxyaabaha kale ee asalka ah organic.
Habka labaad waa faleebo waraabin. Waa lagama maarmaan in la dhigo bareegga qashinka ee booska is-goysyada. Inta u dhaxaysa dhexroor yar oo ka weyn, masaafada 30 cm waa in lagu hayaa.
Sida bacriminta, geedaha waa in la quudiyo sanadka saddexaad ee kobcintooda. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo dalagga saddex ama afar jeer, oo la socdo mudo bil ah:
Guga, geedka wuxuu u baahan yahay dhar dheeraad ah inta lagu jiro xilliga ubax iyo isla markiiba ka dib. Inta lagu jiro ubax, waxaad u baahan tahay inaad xaliso nitrate, taas oo marka hore waa in lagu qasi karaa biyaha, adigoo eegaya saamiga 1:50. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa lime biyo ah (qaad 200 g 10 litir oo biyo ah). Ka dib marka uu dhirta dhamaato, waxaad bacrimin kartaa aagga asaasiga ah xalka nitroammofoski (1: 200). Qayb kasta waxay ku jiri doontaa qiyaastii 30 litir oo ka hooseysa hal geed.
Bacriminta xagaaga waxaa la qabtaa qeybta labaad ee Juun. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo quudinta foliar, ku rushaynta geed leh xal 2% magnesium sulfate.
Maalmihii ugu dambeeyey ee Sebtembar, cherry Zhukovskaya waa in la bacrimiyey leh isku dar ah oo ku jira 20 g chloride potassium, 40 g of superphosphate ee granules iyo 10 litir oo biyo ah. Xalkani waa ku filan hal mitir oo laba jibbaaran oo dhul ah.
Daryeelidda ciidda agagaarka jirku waa wax aan ka yarayn geedi socodka iyo xilliga oo quudinta geedka. Waa lagama maarmaan in la xajiyo wareegga xijaabka ee nadiifka ah iyo in aaney u oggolaan in cawska iyo haramaha ay ku koraan halkaas, maadaama ay ka hortagi doonaan geedka si buuxda u quudinta.
Tan ayaa si gaar ah muhiim u ah in la sameeyo sanadaha hore ee koritaanka geed beerta. Boogaha ayaa laga goyn karaa gacanta labadaba iyo qashinka. Pesticides waxaa mar horeba lagu buufin karaa meel u dhow geedo baaluq ah.
Waa muhiim! Haddii dhirta la dayacay, ka dibna dhalidda iyo tayada miraha si deg deg ah ayay u dhici doonaan.
Dhirta cherry geedka waa in la sameeyaa dhowr marxaladood.
Nidaamka koowaad waxaa la fuliyaa inta lagu guda jiro beerto geedo. Waa in la soo gaabiyo qiyaastii saddex meelood meel. Dhirta maskaxdu waa inay ahaataa qiyaastii 40 cm. Qalabka dhirta laftiisa waxaa laga sameeyaa 6-8 laamood oo waaweyn, oo ku yaalla masaafada isku midka ah ee midba midka kale. Geedka sanadle ah, laamood dhalinyaro ah oo gaadhay dherer 20-40 cm uma baahna in la gooyo. Haddii dhererku ka badan yahay 50 cm, markaa waa lagama maarmaan in la soo gaabiyo sadex meelood meel. Sidoo kale waa inaad ka saartaa caleemaha ka soo xididada, ka jar dhammaan laanta jabtay iyo waxyeelo.
Muuji waxyaalihii gabalka cherry ee guga.
Laga bilaabo sannadka shanaad ee nolosha geedka, waxaad bilaabi kartaa inaad sameysid taajkii. Laamaha dhirta ayaa loo baahan yahay in la gaabiyo meesha uu korayo ee laamaheeda dhinacyadu istaagaan. Caleemaha cusub ee kor u qaadaya iyo dhumucda taajka waa in lagu dhajiyaa meesha ay ka baxaan laanta muhiimka ah. Goobta lafteeda waa in la gaabiyaa 3-3.5 m.
Gubashada dayrta - gaar ahaan ka hortag. Mar labaad, laamaha la go'doomay iyo la qalajiyey waa in laga saaraa, ka dibna waa in laga saaraa goobta oo gubay. Tan waxaa loo sameeyaa sababtoo ah suurtogalnimada helitaanka shakhsiyaadka waxyeellada qaba. Seddexdii sanaba mar, waxaa suurtagal ah in la fuliyo wax-soosaarka gabaadka gabowga. Tani waa in la sameeyaa kiiska marka koritaanka laamaha garsoorka ka yar yahay 15 cm sanadkii. Waa lagama maarmaan in la gooyo lafaha qalfoofka hal dalool sadexaad.
Waa muhiim! Kala saarida isku mar ee tiro badan oo ah laamaha ayaa kicin kara qeeybta, sidaas darteed dib u soo kabashada waa in la fuliyaa dhowr marxaladood. Boogaha, oo loo sameeyay inay sabab u noqdaan dhimista, waxay u baahan yihiin in lagu daweeyo beerta beerta.
Beeluhu waa mid u adkaysata coco-socodka iyo calcium. Laakiin, nasiib daro, liiska cudurada halis galin kara geedaha beerta ma dhicin.
Hubi cudurada ugu weyn iyo cayayaanka ee jeeriga.
Tixgeli kuwa ugu muhiimsan, iyo sidoo kale hababka wax looga qabanayo iyaga iyo hababka looga hortagi karo:
Gubashada monilial Cudurkaan wuxuu saameyn karaa miraha, ubaxa, ugxan-yada, iyo sidoo kale koritaanka dhalinyarada. Cudurka noocan oo kale ah wuxuu muujiyaa nabarada jilicsan ee qaybaha geedka, kuwaas oo lagu daboolay barkimooyin leh dhuunta fungal. Caleemaha waxyeelada leh waxay ku dhalaan xanjo, sababtoo ah barkimadu waxay bilaabmayaan in ay burburaan, iyo miraha kalluunka. Daweynta geed ayaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo HOM (40 g oo ah sheyga ayaa loo baahan doonaa 10 litir oo biyo ah). Baydhabo ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa. Laamood waxay u baahan yihiin in la saaro oo la burburiyo. Cudurka noocan oo kale ah waa laga hortagi karaa adoo qodaya ciidda xilliga dayrta, iyo sidoo kale nadiifinta caleemaha dhacday.
Jeex. Astaamaha ugu weyn waa calaamado bunni ah oo dabooli kara berry. Caleenta wuxuu bilaabmaa inuu ku xoqo tuubooyinka oo si tartiib ah u qalalan.
Haddii miraha wali wali lagu guulaysto guuldarro, waxay joojinayaan horumarinta. Si looga hortago dhibaatadan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo koloriin bakoor (10 litir oo biyo ah 40 g) ama Bordeaux isku dar ah (1%) oo ku yaala geedka marxaladda gaduudan, ka dib markii ubax iyo ka dib.
Dhab. Xaaladaha Brown ee dibedda caleenta waxay noqon doontaa calaamad.
Haddii sida geedka noocaas ah looma daaweeyo, markaa ma dhali doonaan midho. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo oxychloride naxaas ka hor ubax iyo ka dib dhammaystirka. Nadiifinta iyo waqtigeeda nadiifinta iyo burburinta caleemaha dhacday ayaa ka caawin kara in laga fogaado cudurka.
Gommoz. Cudurku wuxuu u muuqan karaa geedo ay saameysay by fungus. On dusha sare ee jir iyo laamaha u muuqdaan xanjo, taas oo ka dibna adag. Booguhu waxay u baahan yihiin in lagu daweeyo 1% bakteeriyada naxaasta ah.
Si looga hortago dhacdada cudurka, waa inaad ka fogaataa dhaawaca farsamada geedka. Qaybaha isku midka ah waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo garoon beerta.
Klesterosporiosis. Xaaladaha burka ee xayiraadda xuduudda cas waa calaamad cad oo ku saabsan cudurkan. Laba toddobaad ka dib, saxanka caleenta ee saameeya ayaa bilaabi doona "qolofta", taasoo keeni doonta godadka caleemaha. Caleemaha waxaa sidoo kale lagu daboolayaa noocyada noocan oo kale ah, ka sokow, foomka dillaacsan ee meeshan iyo cirridku waxay bilaabaan inay muujiyaan.
Waa lagama maarmaan, ka dib marka geedku dhammeeyaa inuu ubaxsado, inuu ku buufiyo dioxide chlorine ama isku darka Bordeaux.
Cayayaanka sidoo kale waxay noqon kartaa halis ah noocyo cherry Zhukovskaya:
Aphid Waxay ku degtay geed, waxay bilaabeysaa inay ku quudiso dheecaanka caleemaha, taas oo keenaysa in dambe inay qalalaan. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo geedaha Nitrofen horaanta guga (30 g of diyaarinta waa in lagu qaataa baaldi biyo ah).
Caleemaha lagu buufiyo waa in lagu buufiyaa Karbofos (30 g 10 litir oo biyo ah). Ciribtirka cudurku wuxuu kaa caawinayaa in laga saaro qulubka xididka.
Weevil. Kani waa lamid ah oo quudiya ubaxyada cherry iyo burooyinkeeda. Gudaha beeraha, dheddigga ayaa awoodi doona in ay jiifaan ukunta, iyo dirxiga markaas ka dib cuni doona waxyaabaha ku jira lafaha.
In dagaalka ka dhanka ah weevil, ku xoqin leh "Karbofos" caawin doonaa in muddada ubax ee geedka dhamaadey. Sida qiyaasta ka hortagga, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo muraayada dayrta ee ciidda iyo ilaalinta nadiifinta wareegga geedka.
Mucus sawfly. Cayayaanka ayaa caleemaha ku ciribtirma sida xayawaanka ka soo jeeda. Sidaa darteed, caleenta ayaa soo baxa. Sida ugu dhakhsaha badan ee la ogaado dirxiga, waa in si dhakhso ah loola dhaqmaa Karbofos.
Cherry Zhukovskaya leeyahay labada faa'iido iyo faa'iido:
Faa'iidada shaki la'aanta waa dhalidda sare ee kala duwan, sababtoo ah leh hal qof weyn oo aad u qaadan karto ilaa 30 kg oo miraha casiir leh.
Sidoo kale waa muuqaal aad u fiican oo ah iska caabin u dhaxeysa. Xitaa tamarta si buuxda u bislaaday waxay awoodaan inay qabtaan laanta.
Miraha waa weyn, qurux badan, dhadhan fiican leh iyo casiir leh. Intaa waxaa dheer, saxarada si fudud ayaa looga soocayaa lafta.
Sida for cilladaha, geedka ma aha mid u adkaysata qabow. Xilliga jiilaalka, burooyinkeeda ubaxyada badanaa way ku xanuunsan karaan, qoryaha ayaa wax yar la qaboojin karaa.
Kedis la'aan. Si aad u xirto berry waxay u baahan tahay xaafad geedaha kale ee rimista.
Dhagax. Cabbirka lafaha badan oo weyn oo awood u leh in uu qaato tiro ballaaran oo uurjiif ah.
In kasta oo ay jiraan cillado yaryar, noocyo cherry jukovskaya ayaa weli caan ah iyo suurad wacan ee bannaanka u badan sanado badan. Xitaa ninkii beerta nudaha ah wuxuu awoodi doonaa in uu koro geedo waaweyn oo midho ah, iyo dhalidda, si taxadar leh u ilaalinta miraha, waxay ku farxi doontaa ninkii beerta ka shaqaynayay sanado badan.